Archive du 20200611
Coronavirus Niampy iray indray ny maty
Vehivavy iray 61 taona, notsaboina tao amin'ny hopitaly manarapenitra CHU Morafeno Toamasina no namoy ny ainy. Diabetika no sady nisy tosidra ambony ity vehivavy ity, raha ny tatitra nataon’ny Pr Vololontiana Hanta.
Christine Razanamahasoa Tsy hanaiky lembenana amin` ny fanesorana azy
“Amin` ny maha solombavambahoaka ahy, lany tamin` ny 2è “mandat” aho. Voafaritra fa efa tsy maintsy mivonona hatrany misedra amin` izany
Solon’i Thierry Rakotonarivo CENI Nahemotra indray ny fifidianan’ireo depiote
Fanonganana ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra Fanakorontanana fotsiny hoy ireo depiote
Naneho ny heviny ny solombavambahoakan'i Sambava mivondrona ao amin'ny GPR fa mbola mahavita ny asany ny Birao maharitra.
Vaomiera misahana ny fampianganana eny amin`ny HCJ Tsy raikitra ihany koa ny fifidianana teny amin’ny CCI
Fandaharam-potoana tafiditra teo amin` ny Antenimieram-pirenena ny solontenan` izy ireo eo amin` ny Fitsarana ambony (HCJ).
Lalàna mifehy ny fanoherana Ny 25 jona izao no handaniana azy
Adihevitra tsy mety vita ny mahakasika ny lalàna mifehy ny fanoherana eto amin’ ny firenena.
Tsarafasina Moramanga 7 andro anio niaina ao anaty haizina
Miditra amin’ny andro faha-7 anio alakamisy11 jona 2020 ny fiaiainan’ny mponina ao amin’ny fokontanin’i Tsarafasina distrikan’i Moramanga Faritra Alaotra Mangoro noho ny fahamaizan’ny “Transfo”
Etazonia Lany andro ny pasipaoron’ireo Malagasy 2000
Malagasy miisa 2000 any Etazonia no lany andro ny pasipaoron’izy ireo, kanefa tsy afaka mody aty an-tanindrazana,
Lalàna mifehy ny Toaka Gasy Miandry ny Antenimierandoholona
Efa vita ny anjara asa ny Antenimieram-pirenena mikasika ny tolo-dalàna lah. faha 03-2019/PL mikasika ny famokarana sy famarotana ny toaka gasy. Amin’ ny 19 jona izao no mandalo asam-baomiera eo anivon’ ny
Romain Metanire Ankafizin’ny mpanao gazety amerikanina
Araka ny fandaharan’ny mpanao gazety eo anivon’ny Major soccer league news na ny gazety natokana ho an’ny fifaninanam-pirenena amerikanin’ny baolina kitra dia ilay malagasy, Romain Metanire,
Roger Federer Amin’ny 2021 vao hiverina hilalao
Taorian’ny nandidiana ny lohaliny indray dia nanambara tamin’ny tambazotran-tserasera omaly alarobia 10 jona 2020 ilaympilalao tenisy Soisa kalaza mitana ny laharana faha-4
Ligin’ny baolina kitra - Matsiatra Ambony Nahatsiaro manokana an’ireo andriambavilanitra
Amin’ny maha-vehivavy mpitantana ny baolina kitra ao amin’ny ligin’i Matsiatra Ambony azy dia tsy nanadino velively an’ireo renim-pianakaviana toa azy ny filohan’ity rafitra ity,
Ho sangany amin’ny inona marina ?
Raharaha nafana teto amin’ny firenena ny tetikasa fananganana ny tanàna vaovao Tanamasoandro, izay nisiana fifanjevoana tamin’ireo mponina.
Zotra nasionaly Nolavin’ny minisitra ny fangatahana hiasa
Mbola tsy azo sokafana ny nasionaly sy ny rejionaly noho ny zavatra mitranga, mbola tena misy sy mitombo ny valanaretina, hoy ny Minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro Joel Randriamandranto.
Ankazondandy Misy lalana simba atahorana hampidi-doza
Lalam-pirenena faha 3, eo amin’ny manodidina ny PK45, anatin’ny kaominin’Ankazondandy,
Faritra Atsinanana Nametrahana ivontoerana ara-pahasalamana manokana
Tonga nijery ifotony ny fametrahana ny ivon-toerana ara-pasalamana manokana momba ny fahamehana ara-pahasalamana ho an’ny faritra Atsinanana omaly ireo tomponandraiki-panjakana any an-toerana.
Fizahan-tany anatiny Sehatra azo trandrahana tsara
Anisan’ny sehatrasa mizaka ny tsy eran’ny aina ary potika tanteraka noho ny fipariahan’ny covid-19 maneran-tany ny tontolon’ny fizahantany. Maloka tanteraka, araka izany, ny hoavin’ny fizahantany hatreto noho ny “coronavirus”.
Olobe eto Madagasikara Manameloka ny fananganana ny “Colisée”
Niray feo tamin’ny alalan’ny Antenimieran’ny olobe eto Madagasikara (AOM) ireo olobe manerana ny nosy manoloana ny fananganana Colisée eny anatirova. Nanambara ny AOM fa mitana haren-tsaina sarobidy ny rova.
FI.TRA.MA Hanokatra hopitaly hitsaboana ireo mararin’ny AVC
Ny 35 %-n’ny Malagasy tamin’ny taona 2015 no fantatra fa tratry ny aretina AVC na ny fahatapahan’ny lalan-drà araka ny fanadihadiana nataon’ny Association de Médecine Physique et de Réadaptation à Madagascar ( AMPR).
Imerintsiatosika Olona 11 nafenina tao anaty kamiao
Kamiao mpanangom-bokatra hiakatra ho aty Antananarivo no fantatra omaly fa tra-tehaky ny Polisy tetsy Imerintsiatosika.
Namontana Hampidirina ao anaty tsena avokoa ny mpivarot ra
Nidina ifotony teny amin’ny tsenan’Anosibe omaly ny Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra Naina Andriantsitohaina.
Federasionin’ny mpanao asa tanana “Ho laharam-pahamehana ny fametrahana azy”
Ho atao laharam-pahamehana ny fametrahana ny federasionin’ny mpanao asa tanana izay mamondrona ireo seha-pihariana miisa 114 miompana amin’izay resaka asa tanana izay,
Miarinarivo Zazalahy 16 taona nanolana zaza 8 taona
Tovolahy iray, 16 taona monja no tra-tehaky ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’i Miarinarivo rehefa avy nanolana zaza vavikely iray vao 8 taona Alatsinainy 08 jona teo tao amin’ny tsenan’i Miarinarivo.
Alaotra Mangoro Miaramila iray matin’ny tazomoka
Miaramila iray no nodimandry vokatry ny tazomoka mahery nahazo azy tany Ambatondrazaka omaly maraina. Miasa amin’ny barazy na ny sakana ao Ranofotsy amin’iny làlam-pirenena faha-44 iny izy io.
Mpivarotra sainam-pirenena Mahavita dia an-tongotra 15 km isan’andro
Nanomboka ny 01 Jona lasa teo no mandehandeha mitety tanana ireo mpivarotra sainam-pirenena ho fankalazana ny tsingerin-taona faha-60 niverenan’ny fahaleovantena.
Antsirabe Milamindamina ny fiainam-bahoaka
Milamindamina ihany amin’ny ankapobeny ny fiainam-bahoaka ao an-tanànan’Antsirabe Faritr’i Vakinankaratra raha ny vaovao voaray avy any an-toerana amin’ny ankapobeny.
Madagasikara 16 tapitrisa no mbola tsy mahazo rano fisotro madio
Nanatanteraka famelabelaran-kevitra narahina adihevitra teny amin’ny Antenimierandoholona ny “WaterAid” omaly 10 jona 2020. Fiaraha-monim-pirenena miandraikitra ny rano ny “WaterAid”
Toetry ny andro Hiakatra kely ny maripana manomboka anio
Mbola hamirifiry ny hatsiaka rehefa maraina ato anatin'ny telo andro ho avy, raha ny fanazavan’ny sampan-draharaha mpamanatra ny mety ho toetry ny andro.
Mararin’ny covid-19 ny toekarena Tafiakatra 4 308,47 Ar ny Euro iray
Tafiakatra 4 308,47Ar ny sandan’ny 1euro omaly 12 jona, izay midika fa mitotongana tanteraka ny sandam-bola Malagasy. Tarehimarika tsy mbola fahita io hatramin’izay, izay midika fa ao anatin’ny fitotongan’ny toekarena tanteraka ny firenena Malagasy.
Antanety II Ivontovorona 8 mianaka ahiana ho tratry ny Covid 19
Olona 8 mianaka amin’ny 13 no ahiana ho tratry ny Covid 19 ao Antanety II, Fokontany Ivontovorona, kaominina Alakamisy Fenoarivo.
Voan’ny Coronavirus Olona 100 karohana…
Manohitra sy tsy mety hoentina any amin’ny Hopitaly ny ankamaroan’ireo olona voamarina fa voan’ny coronavirus any Toamasina, raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Repoblikan’i Tchad Naka CVO 20 000 indray, hanandrana ilay tsindrona
Taorian’ny fahombiazan’ny fampiasana ny Tambavy CVO tamin’ny fitsaboana ireo mararin'ny coronavirus tao aminy, dia namerina nandefa fiaramanidina manokana teto Madagasikara ny Repoblikan’i Tchad,